★မြန်မာ့အလင်း★: Iran Attack Would Be Airborne, Followed By “Velvet Revolution”
Iran Attack Would Be Airborne, Followed By “Velvet Revolution”
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 8:42 AM
စေတနာဆိုတာ ကျွန်ကုလားနဲ့ မတန်ပါ . . ဒန်.. ဒန်. .. ...
Allah ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ Allahက မွတ်ဆလင်...
ကျွန်ကုလားတွေက အသေခံပြီး Allahကိုချစ်ကြပါတယ်။ Alla...
Allahသည် ကုလားတွေကို သတ်နေသည်။ သွားရောက်ကူညီသောသူသ...
Allahကို ပုန်ကန်နေသော မြန်မာပြည်မှ ကျွန်ကုလားများ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Allah ရယ် (၂) .. ဟိဟိ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Allah ရယ် (၁).. ခွိခွိ
မွတ်ဆလင်တွေက Allah ကို ချစ်တယ်ဆိုပဲ.. ၀ါးဟားဟား
Allah ရဲ့ တန်ခိုးက တကယ် ကြီးတယ်.. ဟဲဟဲ
THANK YOU ALLAH .. . ဒန်..ဒန် .. ဒန်
Strange weather phenomenon filmed in MOSCOW. Octob...
ရုပ်အဆင်းချို့တဲ့သော ကျွန်ကုလားတွေ စစ်ဗိုလ်ဟန်ဆောင...
ပြည့်တန်ဆာလောက်တောင် မယုံကြည်ထိုက်သည့် တပ်မတော်
Iran Attack Would Be Airborne, Followed By “Velvet...